Rank to the next step and Win Daily Quest. - Splintertalk
Rank to the next step and Win Daily Quest.
Hello everyone. Today is the third day I started playing Splinterlands Game. After purchasingaspell book yesterday, I gotachance to play Daily Quest. Today's Daily Quest is Death Quest. Before playing Death Quest, I played3matches with other items and won 1 match and lost2matches. Anyway, after winning the game, I was encouraged to play. My rank also came from NOVICE to BRONZE III.
Finally, I chose to play with Death Items because I wanted to play Daily Quest successfully. I didn't know Death Quest at first, but I did understand italittle while playing it. So, to win the Daily Quest, you have to fight with the Death Quest item and win the first match. You need5wins to win Daily Quest. After playingatotal of 11 matches, Daily Quest was successful. However, Daily Quest Rewards could not be retrieved. Below isapicture and I would like to know why it is not available.
Not much has been learned about the Splinterlands game yet. Admittedly, some heroes have not been systematically linked. I just played with it as I saw fit. You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါဗျ။ ကျွန်တော် Splinterlands Game ကိုစတင်ကစားခဲ့တာ ဒီနေ့ဆို ၃ရက်မြောက်ဖြစ်ပါသည်။ မနေ့က spell book ၀ယ်ယူပြီးတဲ့နောက် Daily Quest ကစားခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့အတွက် Daily Quest ကတော့ Death Quest ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Death Quest မကစားခင်မှာ အခြားသော item များဖြင့် ၃ ပွဲခန့် ကစားပြီး ၁ပွဲနိုင် ၂ ပွဲရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ပွဲလေးရတော့ ကစားရတာ အားတက်မိပါတယ်။ မိမိ၏ Rank မှာလည်း NOVICE မှ BRONZE III သို့ရောက်ရှိလာပါသည်။
ပြီးတဲ့အခါ Daily Quest အောင်မြင်အောင် ကစားချင်သောကြောင့် Death Item များဖြင့်သာ ရွေးချယ်ကစားခဲ့ပါသည်။ Death Quest အား အစပိုင်း မသိသော်လည်း ဆော့ကစားရင်း အနည်းငယ် သဘောပေါက်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် Daily Quest အောင်မြင်ရန် Death Quest item ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရာ ပထမဆုံးပွဲမှာပင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ Daily Quest အောင်မြင်ရန် အနိုင် ၅ပွဲရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ စုစုပေါင်း ၁၁ ပွဲခန့် ကစားပြီးမှ Daily Quest အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် Daily Quest Rewards အားထုတ်ယူမရခဲ့ပါ။ အောက်တွင် ပုံဖော်ပြထားပြီး မည်သည့်အတွက်ကြောင့်မရသည်ကို သိလိုပါသည်။
Splinterlands game အကြောင်းကို အများကြီးမလေ့လာရသေးပါဘူး။ အချို့သော Hero များကို တွဲဆက်ရာမှာ စနစ်တကျမရှိသေးတာ၀န်ခံပါတယ်။ မိမိ အဆင်ပြေသလို တွဲဆက်ပြီးသာ ဆော့ကစားခဲ့ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းလေ့လာသင်ယူရင်း ပိုမို တိုးတက်လာစေရန် အားစိုက်ရပါဦးမယ်။
hive-131619 splinterlands game oneup trafficinsider cent proofofbrain waiv neoxian
events ကို နှိပ်ပြီး splinterlands.com ထဲ ဝင်ကြည့်၊ ပြီးရင် market ကိုနှိပ် ဖုန်းကို အလျားလိုက်ထားကြည့်ရင် peakmonsters တို့ဘာတို့ အပေါ်မှာ တွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ့ peakmonsters sites ထဲ ဝင်ပြီးကိုယ့် account အောက်က explorer ကိုနှိပ်ရင် ဘာဆုရထားလဲ ကြည့်လို့ ရတယ်။ splinterlands ဂိမ်း site ကတော့ အင်တာနက် လိုင်းမကောင်းရင် ဆု ကြည့်လို့မရတတ်ဘူး။
ကြည့်လို့ရပါပြီအမ ALCHEMY POTION တစ်ခု ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ !PIZZA !LOLZ
@myothuzar, I sent you an $LOLZ on behalf of @callmemaungthan
ဂိမ်းလဲ‌ေဆာ့ ဂိမ်းအကြာင်းရေးရင်းလဲ ပိုက်ဆံဝင်ပေါ့ 👍
၂သီးစား ဖြစ်သွားတာပေါ့အကို 😁 အ့မို့ပဲ ဂိမ်းဆော့လိုက်ရပါတယ် !PIZZA !LOLZ
ဂိမ်ထဲကနေ ပြန်ဝင်ပြန်ထွက် ပြန်ဝင်ရင် ပုံမှာပြထားတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်တယ်။
အဲ့ဒီလို ကျွန်နော်ခဏခဏ ဖြစ်ဖူးတယ်။
ဆရာကြီးတွေလောက်တော့ နားမလည်ပေမယ့် ဒီလိုအတွေ့အကြုံကတော ကိုယ်တိုင်ကြူံဖူးလို့ပါဗျာ😁
ဟုတ်ကဲ့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်ခင်ဗျာ !PIZZA !LOLZ
@thurawinkyaw, I sent you an $LOLZ on behalf of @callmemaungthan
ဂိမ်းတွေကလည်း သေချာဆော့နိုင်ပြီး Post ကောင်းကောင်းရေးနိုင်ရင် ပိုက်ဆံရတာပဲနော် !PIZZA !LOLZ
ဟုတ်တယ် 😁😁သူ့ဘက်က Support ပြန်ပေးတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ !PIZZA !LOLZ
@callmemaungthan(5/10) tipped @princekham (x1)
ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ Win-Win-together ပါ !PIZZA !LOLZ
Game တွေကတော့ ကြိုးစားပြီး ဆော့ကြည့်ရဦးမယ်